Yaa farmaajo ii raray? - Geofumadas
Yaa soo jiidatay jiiskayga?
Abriil, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, egeomates My, qgis
Runtii waan jecelahay Geoinformatics, marka laga reebo inaan ahay joornaal leh dhadhan weyn oo ku saabsan qaabeynta, waxyaabaha ku jira aad ayey ugu wanaagsan yihiin arrimaha ku saabsan geospatial. Maanta ayaa la soo saaray nooca Abriil, oo aan ka soo qaatay qoraallo lagu muujiyay casaan si loogu dhiirrigeliyo akhriska suuban.
En qoraaladii hore Dib u eegis ayaan ku sameeyay iyaga, maanta waxaan u qaatay mawduuca boostada maqaal gaaban laakiin aad u qoto dheer oo ku saabsan iska caabbinta isbeddelka ka jira samaynta boodboodka xagga tikniyoolajiyadda il furan. Waxay salka ku haysaa sheekadaas hore ee jiirka oo dhiman rabay maxaa yeelay jiiskeedii ayaa dhammaaday oo raadinta il kale waxay ka hor timid mabaadi'deeda; Kaliya sidaas ayaan moodayay "Waxay u guureen jiiskiisa."
Waana marar badan kuwa ku dhiiranaya inay sheegaan ereyada "gpl", "ilo furan", "bilaash", "gnu" ama kuwa la mid ah waxay u muuqdaan dad ajaanib ah oo ka soo baxaya kaabsal bannaan oo isha ku haya fooddooda. Waxaan la qabsanay inaan aragno astaanta Windows-ka in wax walba oo aan ku shaqeyn dinosaurkan ay umuuqdaan kuwo dhib badan, tirakoobyada ayaa muujinaya, dadku waxay doorbidaan Internet Explorer kan Mozilla, inay tusaale bixiyaan. Qoraalkan Geoinformatics waxaan sii wadeynaa ka hadalka tikniyoolajiyadda furan, xaaladdan PostGIS iyo awooddooda ay u leeyihiin inay la shaqeeyaan database-yada, kuwaas oo aan u maleyno inay tahay olole wanaagsan sababtoo ah waxay horay u muujiyeen GvSIG y GIS Quantum.
Sannadahaygii ugu dambeeyey waxaan imtixaan u qaaday iyada oo la adeegsanayo "barnaamij aan caadi ahayn" sida kala cayncayn ah, Microstation, GvSIG e IntelliCAD; natiijooyinku isku mid ayey ahaayeen oo xitaa way ka fiicnaayeen laakiin tani waxay ku kaliftay inay ii arkaan "dhib". Waan qirayaa, badiyaa waan ahay, laakiin waa lagama maarmaan in la tixgeliyo in noloshan cusub hal-abuurnimadeeda la raadsado, illaa iyo inta aysan gaarsiisnayn laga soo qaado timaha; Waxaan jeclahay tifaftirka Eric Van Rees markii uu ku adkaysto "maxaa laga yaabaa in Google Earth uu ku fakarayo, laga yaabo in dusha sare hoos u dhaco".
Waxaan ka warqabaa in aduunku uusan ka badali doonin PC-ga Linux ilaa sanado badan lagana yaabo in uusan waligiis, laakiin teknoolojiyada furan ee furan waa mowduuc ka socda dalal badan oo leh xoog weyn iyo ilaa mooyee moodeello ganacsi oo cusub oo ka soo baxa dhibaatooyinka waaweyn. wareegsan, waqtiga ayaa noo cadeyn doona sax. Haddii kale, sida uu yiri tababare kubbadda cagta, waxaan ka helaynaa khibrad.
Mid ka mid ah maalmahan dadku waa inay fahmaan inaadan ku noolaan karin burcadnimada AutoCAD, inuu jiro IntelliCAD halkaas oo leh qiimo aad u hooseeya iyo xitaa QCad oo leh qiimo astaan ​​ah; dabcan, haddii aad haysato lacag iyo sharaf, waa inaad ka iibsataa AutoDesk. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la fahmo in 300 oo degmo aysan awoodi karin liisanka ArcGIS Server ee $ 35,000, xitaa xitaa dhammaantood uma baahna (ama kordhinta kale), laakiin waa suurtagal in lagu sameeyo wax la mid ah (ama ka badan) beddelaad adeegsiga dhaqaalaha sida Manifold, Global Mapper, gvSIG, QGis ama Grass. Waxaan jeclahay milicsiga James Fee oo si macno leh u leh "Helitaanka via ftp waa sida ugu fiican ee aad sameyn kartid? "
Dhamaadka, waxaa laga yaabaa inaan waqti ku qaadno oo aan tufno kahadalkeeda, waa macquul, laakiin kuwa iskudaya habab cusub oo isku mid ah isla qiimo jaban ayaa hela faa iidada barashada waxbadan kaligood. Waxaan jeclahay ku adkaysiga Geoinformatics ee daabacaaddan, sameynta cibaado is-baray dareen ah sida loo baahan yahay nin.
Taasi farsamooyinkan Baasaboorka, waa shaki.
Oh, fiiri joornaalka, oo ka hadlaya:
Sidee ayay waxbarashada GIS ee dugsiyada?
CityGML, waa heer caadi ah
Dhaqannada wanaagsan ee fulinta GIS, daabacaadda cusub ee ESRI
Is-dhexgelinta GIS iyo GRID ee maareynta musiibada
AutoDesk ESRI Google Earth Grass GvSIG OS majallado GIS kala cayncayn ah QGIS
Post Previous" Hore Baloogu ma waayi karaa macnahiisa shaqsiyeed?
Post Next Koorsada Cadastre, maalinta koowaadNext »